1. Ao Dongguan, i Shenzhen sy ny toerana hafa dia manana ivon-toerana fizarana entana, indray andro any haka entana.
2. Tazomy ny fifandraisana iaraha-miasa amin'ireo orinasam-pandefasana maro, manome serivisy sampan-draharaha iraisam-pirenena momba ny fandefasana entana, manome toerana malalaka avy hatrany.
3. Miaraka amin'ireo mpiasan'ny fadin-tseranana matihanina, ary ny fadin-tseranana dia misy fiaraha-miasa akaiky akaiky, hahazoana antoka fa vahaolana haingana amin'ny olan'ny ladoany.
4. Fandefasana any Etazonia 14-16 andro any amin'ny seranan-tsambo, 20 andro am-baravarana, ny serivisy amerikana tokana mazava indroa
5. Mba hahazoana antoka fa mandray ara-potoana ny entana ny mpanjifa, ny entana mankany LA dia mankany amin'ny toerana alehan'ny kamio hatrany.
1. Hanao ny famandrihana fandefasana entana, ny fitobiana entana amin'ny entana betsaka, ny famokarana antontan-taratasy, ny fanodinam-bokatra sy ny fonosana, ny fanambaràn'ny fadin-tseranana sy ny maso ivoho ary ny serivisy fijanonana amerikana LCL iray hafa, ho anao hamonjy olana.
2. Mila manome ny entana, ny lisitry ny fonosana fotsiny ianao (ao anatin'izany ny anarana, habe, lanja ary sandan'ny entana) ary ny faktiora proforma. Hikarakara ny zavatra hafa rehetra ho anao izahay.
3. Taratasy fanamarinana DOT nasionaly navoakan'ny Departemantan'ny fitaterana amerikana, miaraka amina tambajotram-pizarana kamio lavorary manerana an'i Etazonia, hanaterana ny dianao manontolo.
4. Ny fiaraha-miasa maharitra amin'ny fiantohana Alemanina Allianz, ny fametrahana haingana ny fanambarana, ny fanambarana ny fanambarana, ny fanekena, ny onitra ary ny fomba hafa dia azo tanterahina ao anatin'ny 7 andro.
5. Manana ny rafitry ny fikarohana vaovao, amin'ny fotoana rehetra hanoratanao ny mombamomba ny entana, hahazoana antoka fa tonga ara-potoana sy milamina ny entanao.
Tombony amin'ny serivisy fandefasana